HUAWEI HISILICON BootLoader Code auto reader apk - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Android Tool Phone Application Unlocker HUAWEI HISILICON BootLoader Code auto reader apk
HUAWEI HISILICON BootLoader Code auto reader apk
Maung Pauk at 11:08:00 PM Android Application, Android Tool, Phone Application, Unlocker,
HUAWEI HISILICON သုံးထားတဲ့ ဖုန်းများအတွက်​ BootLoader Code ကို Auto ဖတ်​​ပေးမယ့် App ​လေးပါ... App ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်​ မိမိဖုန်းက Root ရှိရပါမယ်​.. INTERNET လည်း ဖွင့်​​ပေးထားရပါမယ်​..
BootLoader Code ရပြီဆိုရင်​ ဥပမာ H30-L02 လိုဖုန်းမျိုးဆိုပါ​စို့ ဖုန်းရဲ့ မူရင်းrecovery.img​ ရဲ့ error ကြောင့်​ Dload တင်​လို့မရတဲ့အ​ခြေအ​နေမျိုးတို့ Build number အရမ်းမြင့်​​နေတာမျိုးတို့ဆိုရင်​
Fastboot က​နေ Bootloader unlock လုပ်​ပြီး Dload ကို Extract လုပ်​ Boot/recovery/system/userdata ကို fastboot က​နေ Flash ​ပေးလိုက်​ရုံပါပဲ..
Huawei ရဲ့ ဆိုဒ်​မှာ Bootloader code သွား​တောင်းရင်​လဲ အချိန်​ကကြာမှာပါ..
Boardfirmware တင်​ရင်​လဲ Network Lock က ကျမှာပါ.. Network lock မကျ​အောင်​တင်​နည်းက​တော့ ကျ​နော့ရဲ့ BASIC TO ADVANCE GROUP မှာ ပြ​ပေးပြီးသားပါ..
ယခု Version မှာ​တော့ Root Access နဲ့ Internet လိုင်းလိုအပ်​ပါမယ်​
​နောက်​ Version မှာ​တော့ Root မလိုဘဲ String နဲ့. Bootloader code ကိုလှမ်းဖတ်​နိုင်​​အောင် လုပ်​​ပေးပါ့မယ်​
ကဲ Click တချက်​နှိပ်​လိုက်​တာနဲ့ Bootloader Code Auto ထွက်​လာမဲ့ App ​လေးကို ​အောက်မှာ ​ဒေါင်းလိုက်​ပါအုံး ..
App မပြီးခင်​မှာ Model အမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်​​ပေးတဲ့ ညီကိုများလဲ ​ကျေးဇူးအထူးပါ
APP ရဲ့ Password က​တော့ yethuyalinn ပါ
HUAWEI HISILICON သုံးထားတဲ့ ဖုနျးမြားအတှကျ​ BootLoader Code ကို Auto ဖတျ​​ပေးမယျ့ App ​လေးပါ... App ကိုအသုံးပွုဖို့အတှကျ​ မိမိဖုနျးက Root ရှိရပါမယျ​.. INTERNET လညျး ဖှငျ့​​ပေးထားရပါမယျ​..
BootLoader Code ရပွီဆိုရငျ​ ဥပမာ H30-L02 လိုဖုနျးမြိုးဆိုပါ​စို့ ဖုနျးရဲ့ မူရငျးrecovery.img​ ရဲ့ error ကွောငျ့​ Dload တငျ​လို့မရတဲ့အ​ခွအေ​နမြေိုးတို့ Build number အရမျးမွငျ့​​နတောမြိုးတို့ဆိုရငျ​
Fastboot က​နေ Bootloader unlock လုပျ​ပွီး Dload ကို Extract လုပျ​ Boot/recovery/system/userdata ကို fastboot က​နေ Flash ​ပေးလိုကျ​ရုံပါပဲ..
Huawei ရဲ့ ဆိုဒျ​မှာ Bootloader code သှား​တောငျးရငျ​လဲ အခြိနျ​ကကွာမှာပါ..
Boardfirmware တငျ​ရငျ​လဲ Network Lock က ကမြှာပါ.. Network lock မကြ​အောငျ​တငျ​နညျးက​တော့ ကြ​နော့ရဲ့ BASIC TO ADVANCE GROUP မှာ ပွ​ပေးပွီးသားပါ..
ယခု Version မှာ​တော့ Root Access နဲ့ Internet လိုငျးလိုအပျ​ပါမယျ​
​နောကျ​ Version မှာ​တော့ Root မလိုဘဲ String နဲ့. Bootloader code ကိုလှမျးဖတျ​နိုငျ​​အောငျ လုပျ​​ပေးပါ့မယျ​.. ကဲ Click တခကျြ​နှိပျ​လိုကျ​တာနဲ့ Bootloader Code Auto ထှကျ​လာမဲ့ App ​လေးကို ​အောကျမှာ ​ဒေါငျးလိုကျ​ပါအုံး .. App မပွီးခငျ​မှာ Model အမြိုးမြိုးကိုစမျးသပျ​​ပေးတဲ့ ညီကိုမြားလဲ ​ကြေးဇူးအထူးပါ.. APP ရဲ့ Password က​တော့ yethuyalinn ပါ
Credit : ရဲသူရလင်း
Hi Bl Reader.apk : 676.53 Kb
Android Application, Android Tool, Phone Application, Unlocker
Android Application Android Tool Phone Application Unlocker